ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: အမေအို မျှော်ရာလေရော့မယ်နော်.
မွေးမေမေ.ရေ.မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျောင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့အတူ. အရမ်းပူပြင်းလှတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နွေရာသီကို အံတု
ပြီး.အမိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးကို မမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲ.သွားလာနေရလေတော့ မွေးမေမေ မျှော်နေရော့မယ်
နော်.အမေအို တယောက်တော့ ကျမ္မာရေးကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရဲ့လေ.ခု.ဆို သားတို့နေတဲ့နေရာမှာ အရမ်းပူနေပြီလေ.မွေးမေမေ.ပြောတဲ့စကားနားထဲကမထွက်ခဲ့.အရမ်းပူရင်အပြင်မထွက်နဲ့တဲ့.ကလေးတယောက်
မျက်နှာမှာ ကုတ်ကုတ်လေးထိုင်လို့.ဘုရားနဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေကို .သားတတ်သိသမျှဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကို
ခု လောလောဆယ်ဆယ်တော့ ကျောင်းသားဖြစ်ဘို့ကိစ္စမသေခြာ မရေရာသေးသမျှ အမေအို မျှော်နေရှာရော
ပေါ့လေ.ပြီးစီးတာနဲ့ အမေအိုသည် ကို အပြေးကလေးနဲ့ အမေရဲ့အနားမှာ ရက်များရှည်ကြာနေမည်လို့ဆုံးဖြတ်
လ္ဘက်ခွက်လေးကိုင်လို့ အမေအိုရဲ့လက်ရာလေးကို.စားခွင့်ကြုံရတော့မှာပါလေ.ခု..ဆို ပုပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ.
မအိပ်နိုင်လေတော့.အမေကိုလဲတမ်းတမိလေတော့အမှတ်တရအဖြစ်.post တခုအဖြစ် ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လေ.
သားကတော့အမေအို အကြောင်းတွေးလို့.အမေရဲ့ပုံရိပ်တွေထင်ဟပ်လို့.အတွေးနဲ့ထပ်တူ အမေအိုများ.ကျမ္မာ
ရက်လေးတွေတောင်ရှိခဲ့ပါရဲ့.မှတ်မှတ်ရရ.မွေးမေမ ရဲ့ ခြေရာယူမိတဲ့နေ့မှာ.အမေအိုရဲ့ ပေးတဲ့ဆုတွေ
အမေ မှတ်မိမလား.အမေအိုရဲ့ သားမှာလေ.အမေအိုရဲ့ခြေရာယူနေဆဲ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယို ရိုက်နေဆဲမှာ
မြေနဆည်နိုင်တဲ့ မျက်ရည်ဥတွေ ကျခဲ့တယ်လေ.ခုသည်လည်း အမေအိုအကြောင်းတွေးမိရင် မျက်ရည်လည်ပြီး
ဆိပ် ညိမ်သက်နေတဲ့ သားရဲ့ အိမ်ခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ တိတ်တိတ်ကလေးငိုနေတယ် .ငြိမ်ငြိမ်လေး.ငိုနေမိတယ်အမေ..မကြာခင်အချိန်တောအတွင်းမှာ ပြီးနိုင်မယ်လို့ ထင်နေတဲ့ကျောင်းကိစ္စလေး
ပြီးတာနဲ့..အမေအို မျော်နေရော့မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့.အမေအို.တယောက် ဥပုသ်သီတင်းသီလ စောင့်မြဲသော
အမေအို.ဟု ယုံကြည်မိနေတဲ့သားသည်လည်း.ယနေ့ထက်တိုင်အမေအိုသည်လည်း ဥပုသ်စောင့်မြဲသောအမေ
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 2:13 PM